Ndinokutendai nekushanyira yedu Christian Resource Center. Iyi peji yemhando yakasikwa kuitira kuti vaKristu vose neavo vanoda kutsvaga nezvaIshe. Takaisa pamwe runyorwa rwemaKirisiteri ruzivo rwekuIndaneti huchashumira kugadzirira vatsvene vashandi kuburikidza neruzivo rweShoko raMwari. Zvose zveChristian Bookstores uye Zvinyorwa zvakanyorwa muchitsauko ichi ndezvinazvo uye zvinoshandiswa nhengo dzekereke dzaKristu.
PaMenu Menu yakanyorwa pamusoro apa unogona kuvhara pane chero humwe hutano hunowanikwa pa "Resources" tab kuti uwane kuwanikwa kwepaIndaneti nemashoko ekufarira.